एसी नै खतरा गर्मीमा ! – गोर्खा संसार
एसी नै खतरा गर्मीमा !
गोर्खा संसार२०७४, २४ चैत्र शनिबार ०८:२०
काठमाडौं,२४ चैत ।
गर्मीबाट राहत लिन सहरी क्षेत्रमा एसी (एयर कन्डिसनर)को बढी नै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । घरभन्दा अफिसमा लामो समयसम्म एसी प्रयोग गरिएको पाइन्छ । गर्मीमा तत्काल राहत दिने एसीमा लामो समयसम्म निरन्तर बस्दा विभिन्न समस्या निम्त्याउने सम्बन्धित विज्ञहरूले सुझाब दिएका छन् । कडा एसीमा लामो समय रहादा निम्तिने समस्या यस्ता छन् ।
एसीमा धेरै बेर बस्दा भाइरल इन्फेक्सनको खतरा पनि हुन्छ । रुघा–खोकी निम्त्याउँछ । विद्युत् जडान हुने भएकाले एसी मेसिनको कुनै भागमा तातोपना पनि हुन्छ । यस्तो ठाउँमा लामखुट्टेहरू लुकेर बस्ने गर्छन् । अफिसमा धेरै व्यक्ति एउटै कोठामा हुने भएकाले ती लामखुट्टेमार्फत डेंगोजस्ता खतरनाक रोग फैलिन पनि सक्छ ।
छाला र कपालमा असर
दुई घन्टाभन्दा बढी समय निरन्तर एसीमा बस्दा छालामा पनि असर निम्त्याउँछ । एसीको चिसो हावाले छालाको चिल्लोपन सोसेर निकै रुखो बनाइदिन्छ । एसीले कपाल पनि सुक्खा बनाइदिन्छ । त्यसैले सकेसम्म एसीबाट टाढा रहेकै राम्रो हुन्छ । मस्चराइजर लगाएर बसे छालालाई केही हदसम्म जोगाउन सकिन्छ ।
लामो समयसम्म निरन्तर एसीमा बस्दा साइनसको खतरा हुन्छ । एसीको चिसो हावाले म्युकस ग्रन्थिलाई कठोर बनाइदिन्छ र हाछ्युँ आउने तथा पिनासको सम्भावना बढ्छ । निरन्तर चार घन्टाभन्दा बढी एसीमा बस्दा टाउको दुख्न पनि सुरु गर्छ । शरीर नै झुम्म बनाउँछ । कहिलेकाहीँ एसी लामो समयसम्म सफा गरिएको हुँदैन । प्राय: अफिसमा राखिएको एसीमा यो अवस्था हुन्छ । एसीमा जमेको फोहोर चिसो हावासँगै फैलिँदा एलर्जीको खतरा पनि हुन्छ ।
निकै कम तापक्रम भएको एसीनजिक लागातार लामो समय बस्दा शरीरमा तापक्रम मेन्टेन गर्न समस्या पर्छ । निकै बढी कसरतपछि मात्रै शरीरको तापक्रम ठीक ठाउँमा आउँछ । यसकारण शरीरमा लामो समयसम्म थकान महसुस हुन्छ ।
एसीबाट निस्किने चिसो हावाले कुनै समय शरीरका जोर्नीमा दुखाइ निम्त्याउँछ । गर्दन, हात र घुँडामा लामो समयसम्म चिसो हावाले हान्दा दुख्न थाल्छ । र, दुखाइ लामो समयसम्म कायम रहे ठूलै रोग निम्तिने खतरा पनि हुन्छ ।
लामो समय निरन्तर एसीमा बस्दा आँखा सुक्खा हुन्छ । सुक्खा हुँदै गएपछि आँखामा पीडा महसुस हुन्छ । आँखा रातो हुने, पोल्ने र आँसु बाहिर निस्किएर निक्कै सुक्खा हुन्छ । यसले आँखालाई कमजोर बनाउँछ । एसीको सीधा तल बसेको छ या एसी आफूभन्दा अगाडि छ भने आँखामा खतरा बढी हुन्छ ।